Yini ebangela igazi eli-sludgy? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Igazi le-Sludgy - uxazulula kanjani
Igazi le-Sludgy - uxazulula kanjani
Yini ebangela igazi eli-sludgy?
Kunezici eziningana ezingakwenza lokhokubangele igazi elijiyile, njenge: okweqileigaziamaseli ajikelezayo. izifo ezithintaigaziukujiya. amaprotheni okujiya ngokweqile kufayela le-igazi.
(umculo olula) - Ngokuphathelene nokwakheka komzimba, i-gallbladder iyisikhwama semisipha esingu-10 cm esihlala lapha ku-quadrant engenhla engakwesokudla ngaphansi kwesibindi. Inomsebenzi, futhi umsebenzi we-gallbladder kufanele ube yindawo yokugcina, noma inqolobane, yenyongo eveliswa yisibindi sethu. Kubunjwe inyongo yehle igcinwe enyongweni.
Uma sidla, ukudla kwethu kungena esiswini, le misipha iyangena futhi ivimbela ukudla ukuthi kungangeni, ukudla kuhlangana ne-asidi yesisu. Kuleli qophelo, kudedelwa i-hormone bese iyavuka, ivuselele i-gallbladder ukuthi ingene ikhiphe inyongo emgodini omkhulu we-bile bese iya emathunjini. Ngemuva kwalokho, ukudla nakho kuyakhishwa, ama-enzyme e-pancreatic nawo akhishwa, futhi kulapho inqubo yokugaya iqala khona.
Inkinga evame kakhulu esingaba nayo nge-gallbladder ukwakheka kwamatshe enyongo. Ama-85% awo wonke amatshe enyongo angamatshe e-cholesterol. Futhi imvamisa ziqala lapha enyangeni.
Izinkinga ongaba nazo ngezifo ezihlobene nenyongo ukuthi lapho inkontileka ye-gallbladder, i-gallstone bese ifudukela kulokho esikubiza ngokuthi intamo ye-gallbladder bese yenza ukuvinjelwa okuyingxenye. Uma unezimpawu ze-gallstones, izimpawu ezivame kakhulu i-epigastric, ubuhlungu obuphakathi kwesisu, noma ubuhlungu ku-quadrant engenhla yangakwesokudla, abanye abantu bakuzwa kukhanya ngemuva. Uma inamandla ibuye ihlotshaniswe nesicanucanu, uma iba namandla kakhulu ingahlanganiswa nokuhlanza.
Eminye imiphumela ongaba nayo ngezinkinga ze-gallstones ingaba imibala enzima engapheli phakathi kwamahora amane kuya kwayisithupha, ngomkhuhlane ohambisanayo, kanti abanye abantu bangathola i-jaundice. Uma unalezi zimpawu, bangabantu ngokuvamile okudingeka bahlolwe futhi baphathwe ngaphambi kwekamelo labezimo eziphuthumayo. Ezinye izinkinga ongaba nazo nge-gallbladder yizinkinga ezihlobene ne-gallstone, noma lokho esikubiza ngokuthi i-biliary dyskinesia.
Ngoba awunawo ama-gallstones usengaba nezimpawu ezifanayo ngobuhlungu besokudla obuphezulu be-quadrant nesicanucanu esihambisanayo. Kodwa-ke, lokhu kusho ukuthi i-gallbladder ayisebenzi kahle. Ukucaciswa kwezinkinga ezihlobene nenyongo kungaba ukuhlolwa kwelabhorethri ukuhlola ukusebenza kwesibindi, ukuhlola isibalo segazi lakho elimhlophe, ama-x-ray, okusho i-ultrasound.
I-Ultrasound iyithuluzi lokuxilonga elihamba phambili lokuhlola i-gallbladder, ubukhulu bodonga lwe-gallbladder noma i-gallstones. Uma lolu cwaningo lungeluhle futhi usenobuhlungu bohlobo lwenyongo, isifundo esilandelayo kungaba ukuskena kwe-HIDA ukubona ukuthi ngabe inyongo ayisebenzi kahle yini. Uma unezinhlungu ezihlobene nenyongo noma i-gallbladder engasebenzi kahle, ukwelashwa yilokho esikubiza ngokuthi yi-laparoscopic cholecystectomy, noma ukususwa kwe-gallbladder ngezicucu ezine ezincane nangekhamera nethuluzi elincane.
Uyangena, uhlinzwe bese uya ekhaya ngalo lolo suku. Isikhathi sokutakula sishesha kakhulu njengoba kungukuhlinzwa okuncane okuhlaselayo, ukubuyela emisebenzini ejwayelekile, ngaphandle kwemingcele, emasontweni amathathu. Ngokuqondene nokushintsha kokudla, abantu abaningi abadingi ukwenza ushintsho ekudleni, abantu abangama-80% bangadla noma yini abayifunayo futhi, bebona ukuthi kunezinto ezithile ezisaphazamisa izinhlelo zabo futhi bangadinga ukugwema lezi zinto, ikakhulukazi Amafutha.
Njengoba i-gallbladder ihambile, usengakwazi ukwenza yonke i-bile oyidingayo. Esikhundleni sokuzigcina ku-gallbladder, izobe sehla ngomsele omkhulu we-bile osuka esibindini uye emathunjini ngakho-ke usenayo inyongo oyidingayo yokugaya. Njengamanje, le ngenye yezinqubo ezivame kakhulu esizenzayo e-United States.
Ukuthi unama-gallstones akusho ukuthi udinga ukususa i-gallbladder yakho. Kuphela uma unenkinga ye-gallbladder noma ye-gallstone, ubuhlungu besinxele obuphezulu kwesokudla, imisebe ohlangothini, imisebe emuva, isicanucanu, ukuhlanza noma igesi. Lezi yizimpawu ezivame kakhulu ezihambisana nobuhlungu benyongo. - Ukuthola eminye imininingwane ngalo dokotela noma ukwenza i-aphoyintimenti, sicela ushayele isevisi yethu yokudlulisa noma uvakashele ku-notbiggerjustbetterhealth.com.
Luyini uphawu lwegazi elijiyile?
I-Polycythemia vera ayivamileigaziukuphazamiseka lapho kukhona ukwanda kukho konkeigaziamaseli, ikakhulukazi abomvuigaziamaseli. Ukwanda kwe-igaziamaseli enzaigazi liyajiya.Igazi elijiyilekungaholela ekushayweni yimivimbo noma ukulimala kwezicubu nezitho zomzimba.
Amanye amahlule egazi angasongela impilo futhi akumele nakanjani ashiywe engalashwa. Ezweni lanamuhla Ividiyo sixoxa ngezimpawu eziyi-7 ezithule zamahlule egazi ezivame ukungabonakali.
Ngabe isikhumba sakho esivele sakhanya umbala, ubuhlungu beqolo obuqhubekayo, kanye nezikhukhula zethole kungahlobana namahlule egazi? Ngabe kufanele ukhathazeke uma ujuluka ngokweqile? Kuthiwani ngesikhumba esifudumele? ? Sikhuluma ngakho konke lokho FUTHI nokuningi
Isikhumba esinombala Usibonile isikhumba esivele saba mhlophe muva nje? Lokhu kungaba wuphawu lwesimo esiyisisekelo njengokuvimba igazi. Amahlule egazi ajwayele ukwakheka lapho ulimele emzimbeni futhi umzimba wakho udinga ukuma. ukugeleza kwegazi.
Kodwa-ke, ochwepheshe bathi kwesinye isikhathi bakheka emithanjeni nasemithanjeni engenazo izimpawu ezisobala zokulimala. Kungaholela ezinkingeni ezinkulu futhi kwesinye isikhathi kubulale, ikakhulukazi uma kungena ebuchosheni bakho ngegazi lakho. Amahlule egazi anezimpawu ezihlukile kuye ngengxenye yomzimba akuyo.
Esinye sezimpawu ezivame kakhulu isikhumba esishintshe umbala. Okwenzekayo ukuthi ihlule eligcina igazi liphazamisa ukuhamba kwegazi okujwayelekile, okubangela ukushintsha kwesikhumba sakho lapho kukhona khona ihlule. Izindawo ezithile zesikhumba sakho zizoqina noma zibomvu kakhulu.
Uma isikhumba sakho emlenzeni owodwa noma engalweni sibukeka sibomvu kakhulu noma siphaphathekile, kungenzeka ukuthi kukhona ihlule legazi emthanjeni wakho. Ukuqhuma kwegazi emaphashini, okwaziwa nangokuthi i-pulmonary embolism, kungenzeka lapho ihlwili elivela kwezinye izingxenye zomzimba lidlula egazini futhi linamathela emithanjeni yegazi emaphashini. Lokhu kungaholela ezimpawu ezifana nesikhumba esiphaphathekile, esigaxekile, noma esiluhlaza esikhombisa izimpawu ezifanayo, ngakho-ke kungakuhle ukuthi ubonane nodokotela ngaphambi kokuthola noma yimuphi umphumela.
Amajaqamba emilenzeni Ngabe uzizwa sengathi uthambekele ezinkingeni zomlenze? Izinga lempilo yakho? Amathuba akhona okuthi kube negazi endaweni ethile ngaphakathi kwemisipha yomlenze wakho. Izinkinga ezivela kumahlule egazi ziyahlukahluka ngendawo yomzimba. Imilenze imvamisa iyindawo oyithandayo yokucasha.
Amajaqamba emilenze iziqephu zobuhlungu obungazelelwe obungazizwa kahle emisipheni yemilenze. I-deep vein thrombosis (i-DVT) ihlule legazi elenzeka emlenzeni noma engalweni, kepha ikakhulu litholakala ezingalweni ezingezansi], okungukuthi, emlenzeni nasethangeni. Abantu abanegazi elijiyile elinemithambo yegazi banezimpawu ezinjengezinhlungu noma izinhlungu eziqhubekayo emlenzeni owodwa.
Lokhu kungaba yisibonakaliso sokuthi udinga ukusithatha ngokungathi sína. Amahlule angama-venous akhula kancane kancane, kuyilapho amahlule emithambo yegazi eba ngokungazelelwe. Amahlule egazi angaba ngumphumela wokuminyana.
Uma ulele embhedeni noma ungakaze unyakaze umlenze isikhathi eside, ungahle ube negazi emlenzeni ngenxa yokuhamba kwegazi okuphazamisekile. Abantu abaningi bathatha kancane amajaqamba amathole futhi bazizwe sengathi bahamba nezithako zemvelo nokuzivocavoca umzimba. Kodwa-ke, uma lokhu kungenxa yegazi, ngeke liphele uze uthole ukwelashwa.
Uma ungazinaki izigaxa zethole, kunethuba lokuthi ihlule lakho lizoqhekeka lingene egazini. Okubi kakhulu ukuthi ifudukela emaphashini futhi ibangele ukucinana kwamaphaphu, okungaba yingozi. Uyaluthanda lolu hlu kuze kube manje? Yebo, leli phuzu elilandelayo lizokumangaza.
Isikhumba esifudumele Ingabe isikhumba sakho sisezingeni lokushisa eliphakeme kunokujwayelekile? Kupholile ngaphandle, kepha noma kunjalo unomuzwa wokuthi isikhumba sakho sifudumele kakhulu. Kungaba nezinye izizathu ezimbalwa zalokhu, kepha i-clot yegazi imvamisa iba ngomunye wabaqokelwe phezulu.
Lapho ukugeleza kwegazi kuphazamiseka, umzimba wakho ushintsha izinga lokushisa kule ndawo. Umehluko wamazinga okushisa esizeni segazi kungenzeka ubonakale. Imvamisa izimpawu ezintathu zamahlule egazi zihlobene.
Kukhona ukushintsha kombala, amajaqamba emilenze, nesikhumba esifudumele. Lapho unakho konke lokhu, kungaba ukuhlakanipha ukuxhumana nodokotela wakho. ikakhulukazi uma unendaba ka-b. babe namahlule egazi.
Amahlule egazi akha phezulu akha nje ngezansi kwesikhumba. Ingxenye yomzimba wakho lapho kwakheka khona ihlwili legazi izovuleka futhi ifudumele lapho uthintwa. Kukhona ithuba elikhulu lokuthi isikhumba sizophenduka sibe bomvu futhi, okungakhombisa ukushintsha kombala.
Uma ngabe uhlale endaweni yokuhamba izindiza ezinde noma usalulama ekuhlinzweni, ungakunaki! Ubuhlungu beqolo Ubuhlungu bangemuva ngesinye sezikhalazo ezivamile abantu ababhekana nazo. Thatha isikhwama esisindayo, umhlane wakho uyahamba! I-Yoga pose ngaphandle kokugadwa, emuva kwakho kuyahamba! Kepha abantu kaningi abazi ukuthi lokhu kungaba luphawu lwegazi. Kungabonakala kungenakwenzeka, kepha kungaba yinkomba eqinile yokuba khona kwegazi endaweni yokhalo noma e-IVC.
I-inferior vena cava, i-IVC ingumthambo omkhulu kunayo yonke emzimbeni wethu nomthambo omkhulu wesisu ngemuva kwesisu. Ubuhlungu obukhulu beqolo bungaba uphawu lokuqala lwegazi egazini ku-IVC. Ukuqina kwegazi ku-IVC noma i-IVC thrombosis kuvame ukubangelwa isihlungi se-IVC esingatholakali.
Olunye uphawu olubonakalayo kungaba wubuhlungu obukhulu beqolo endaweni engeyona imisipha. Kukhombisa ubukhona begazi. Ubuhlungu buyaphikelela futhi abungekhe buthululwe ngokwelula noma ukubhucungwa.
Qaphela, noma kunjalo, ukuthi ubuhlungu obuphansi emuva ngokuvamile abubangelwa yi-clot yegazi. Ngakho-ke uma ubhekene nobuhlungu beqolo obuqhubekayo futhi uzama ukuzelapha wena, sicela uyeke. Uma kubangelwa ukujiya kwegazi futhi kushiywe kungalashwa, kungadala umonakalo unomphela ngokuvimba igazi emaphethelweni.
Ngaphambi kokuthi siqhubeke, nayi i-athikili ongayithanda. Bheka le ndatshana ukuthola okuningi mayelana nokudla okungu-11 ongakufunda okungakubulala Ukuvuvukala Ukuvuvukala kungenye inkomba evamile yegazi. Lokhu kungenzeka ezingxenyeni ezihlukene zomzimba kuye ngendawo.
Izindawo ezivame kakhulu lapho amahlule egazi akha khona - ukuvuvukala izingalo zakho, izandla, amaqakala nemilenze. Igazi lizungeza ngemithambo emaphethelweni bese ligelezela emuva liye enhliziyweni. Ukujiya kwegazi ekujuleni komthambo kuvimbela ukugeleza okufanele kwegazi engalweni noma emlenzeni othile, kukuvimbele ukuthi kufinyelele enhliziyweni.
amasondo emoto yekampagnolo
Isibonelo, i-vein thrombosis ejulile ibangela ubuhlungu obukhulu nokuvuvukala ezingalweni noma emilenzeni. Ama-valve asemithanjeni yethu ahlala elimele ngemuva kokuthi la mahlule egazi elaphekile. Abantu bahlushwa yi-post-thrombotic syndrome ngenxa yokuphazamiseka kokujikeleza kwegazi.
Lokhu kuholela ezimpawu ezifana nokuvuvukala kwezitho okungapheli nobuhlungu. Kungakhathaleki ukuthi ulingeka kangakanani ekwelapheni ukuvuvukala okungapheli ekhaya ngesifutho esishisayo nesibandayo, sicela wazi ukuthi lokhu kuvuvukala okungapheli kuyinkomba yokuthi kukhona okungahambi kahle, futhi kunethuba elikhulu lokuthi ihlule legazi lingaba endaweni ethile Efihliwe imithambo. Ukuphefumula okuncane Ukuphefumula okuncane kuyisifo esiyinhloko se-embolism ye-pulmonary.
Lokhu kubangelwa ikakhulu yihlule elihambe egazini laze labambeka emithanjeni yegazi yamaphaphu. Kanye nokuphefumula okuncane, uzwa ubuhlungu besifuba nokushaya ngamandla. Ungafinyelela ezingeni lapho ukhwehlela khona igazi bese ubona ukwehla okungazelelwe ku-p kumfutho wegazi.
Iningi lokufa okuhlobene negazi kubangelwa yi-pulmonary embolism (PE). Ngokuhambisana nokuphefumula okuncane, umuntu ophethwe i-pulmonary embolism angahlangabezana nezimpawu ezinjengokozela, ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile, kanye nesimo esisongela impilo, ngakho-ke lezi zimpawu azinakunakwa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Yize i-DVT ne-PE zingathinta noma ngubani, izinkinga zempilo ezinjengesifo esingapheli senhliziyo, umdlavuza, nokukhubazeka zingakhuphula amathuba okuba negazi.
Ukujuluka okweqile Ukujuluka ngokweqile kungenye yezimpawu okungafanele zinganakwa. Yebo, abanye abantu bajuluka ngaphezu kwabanye futhi kujwayelekile. Kepha uma ukuthuthukisa lokhu ngaphandle kwesizathu, kungaba uphawu lwesimo sezempilo esiyisisekelo, njengamahlule egazi.
Ukujuluka ngokweqile kungahambisana nezinye izimpawu zamahlule egazi. Lokhu kuwuphawu lokuthi ihlule legazi linganamathela emaphashini noma enhliziyweni yakho. Leli gazi lingavimba ingxenye yenhliziyo eyondla umthambo, ekugcineni lidale noma lilimaze unomphela imisipha yenhliziyo.
Lokhu kungaholela ekuhlaselweni yinhliziyo. Uma uzwa ubuhlungu besifuba, ukushaya kwenhliziyo okungafanele, nesicanucanu kanye nokujuluka okweqile, shayela igumbi labezimo eziphuthumayo ngokushesha. Amahlule egazi akufanele ashiywe engalashwa.
Ingabe uzibonile ezinye zalezi zimpawu zegazi ezithule? Sazise emibhalweni engezansi. Singathanda ukuzwa kuwe!
Nginganciphisa kanjani i-viscosity yegazi lami ngokwemvelo?
Igazi lemveloizinciphisi ziyizinto ezithiukunciphisaiigaziikhono lokwenza amahlule.
Okunye ukudla nezinye izinto ezingasebenza njengeigazi lemveloukuncipha nosizoukunciphisaubungozi bamahlule buhlanganisa uhlu olulandelayo:
Uma kukhulunywa ngezindaba zenhliziyo nangokulimaza izimpilo zethu, izinciphisi zegazi noma ukudla okuncipha igazi nemithi kudlala indima ebaluleke kakhulu. Uma unezinkinga zenhliziyo nezinkinga, ithi kufanele uqale ukudla ukudla ngezakhi zegazi lemvelo elincanyana. Yini ama-thinner egazi? Ama-thinner egazi yimithi ethathwa ngomlomo noma ngemithambo ukuvimbela ihlule legazi.
Amahlule egazi Imvamisa awabi yingozi, kepha kokunye amahlule egazi angamisa ukugeleza kwegazi liye enhliziyweni, emaphashini, noma ebuchosheni, okuholele ekushayweni unhlangothi noma isifo senhliziyo. Ukujiya kwegazi lakho kuvikela umzimba wakho ekopheni, okuvame ukuthi kube kuhle futhi kusize ekuvimbeleni ukopha. Ama-thinner egazi anciphisa igazi ukuvikela amangqamuzana egazi ukuthi angahlangani emithanjeni nasemithanjeni yegazi, futhi avimbele amahlule egazi ngokwandisa isikhathi esithatha ukwakheka kwamahlule egazi.
Abantu abanezimo ezithile zezokwelapha, njengokushaya kwenhliziyo okungajwayelekile noma ukukhubazeka kwenhliziyo okuzelwe, badinga imithi yokwehlisa igazi ukunciphisa ubungozi bokuhlaselwa yisifo senhliziyo noma isifo sohlangothi. Lokho kusho ukuthi kunconywa labo abaonda igazi kulabo abanegazi egazini emithanjeni yabo nasemithanjeni yegazi. Abanciphisi begazi behlisa ubungozi bokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi ngokunciphisa ukwenzeka kwamahlule egazi.
Kukhona ukudla okuthile phakathi kwemithi enezinto zokuncipha kwegazi ezingasiza ukunciphisa ingozi yokuqina. Qaphela: Ungasebenzisi lezi zinciphisi zegazi zemvelo endaweni noma ngemithi yakho yokuncipha igazi ngaphandle kokukhuluma nodokotela wakho.
Isinamoni iqukethe i-coumarin, isakhi esisebenza njenge-anticoagulant enhle kakhulu. Isinamoni lapho ingadliwa ngamanani amancane izosiza ukwehlisa umfutho wegazi futhi yehlise ukuvuvukala. Ukusebenzisa le spice kungasiza ukunciphisa ukuvuvukala, okuvame ukubangelwa yi-arthritis nezinye izimo zokuvuvukala.
Kodwa-ke, gwema ukusebenzisa isinamoni ngobuningi besikhathi eside UGinger uligazi elincanyana ngoba liqukethe i-salicylate, ikhemikhali lemvelo elitholakala ezitshalweni eziningi ezingavimbela ukujiya kwegazi. Mayelana nokuncipha kwegazi, ujinja usiza ukunciphisa ukuvuvukala emzimbeni futhi kupholise nezinzwa. Kudingeka izifundo eziningi ukuqinisekisa ukusebenza kwe-ginger uma kuqhathaniswa nemithi kadokotela. 3.
I-Cayenne Pepper Upelepele weCayenne unemiphumela emihle kakhulu yokuncipha kwegazi okusiza ukuvimbela ukujiya kwegazi emithanjeni nasemithanjeni. Ngenxa yokuqukethwe kwe-salicylate ephezulu kulezi pepper, kuyasiza ukukhulisa ukujikeleza kwegazi emzimbeni futhi kwehlise nomfutho wegazi. 4.
I-Garlic Garlic isiza ukubulala ama-radicals mahhala emzimbeni, ukuvimbela ukulimala kweseli. Kuyasiza ukuthuthukisa ukubalwa kweplatelet emzimbeni nokwehlisa umfutho wegazi, iGarlic yaziwa nangokuthi Thuthukisa ukujikeleza kwegazi emzimbeni. 5.
I-Turmeric Turmeric, enye yezithako eziyinhloko ze-turmeric, isebenza njenge-anticoagulant. Kuyasiza ukususa i-Cholest Erol ne-plaque egazini ukuyenza ibe mncane futhi ngaleyo ndlela ivimbele igazi ekunqandeni okungenzeka libe ngaphezu kwama-400 Units International (IU) ngosuku okungaba okuphephile ukuthola uvithamini E ekudleni kunokwengezelelwa ekudleni. Ukudla okunothe ku-vitamin E kufaka ama-alimondi, uwoyela we-sunflower, okusanhlamvu okuphelele, njalonjalo.
Ukukhishwa kwembewu kuqukethe ama-antioxidants akwazi ukuvikela imithambo yegazi futhi avimbele umfutho wegazi ophakeme futhi asebenze njengezinciphisi zegazi. Amaqabunga omisiwe asetshenziswe emithini yendabuko yamaShayina iminyaka engaphezu kwengu-1 000. Inhlanganisela eyingqayizivele yama-antioxidants kanye nama-phenolic compounds akhipha isitshalo ngokuya ethambekele ekuthuthukiseni ukujikeleza kwegazi.
Ngaphambi kokucwaninga nganoma yiziphi izinciphisi zegazi zemvelo, xoxa nodokotela wakho. Nazi ezinye izinciphisi zegazi zemvelo ezimbalwa okungekho bufakazi besayensi bokusekela okungenhla. I-Salmon Red Wine Almonds Olive Oil Pineapple Avocado Cherry One note wokugcina, ngenkathi kunenqwaba yezinciphisi zegazi zemvelo ezitholakalayo, ungaqali ukuzisebenzisa ungakaqali ukukhuluma nodokotela wakho.
Lezi zinciphisi zegazi zemvelo zingaphazamisa imithi yakho kadokotela futhi zikhulise amathuba okuphuma kwegazi. Futhi, la makhambi emvelo anganciphisa ukusebenza kwemithi kadokotela futhi ngaleyo ndlela andise amathuba okwakheka kwamahlwili.
aqala nini ukuthengisa amabhayisikili
KULUNGILE ukuba negazi elincane emafinyileni?
Ungahle ukhwehleleokuncaneamanani obomvu ogqamileigazi, noma kubandaigazi-kucasulweisikhwehlela(isikhwehlela).Igaziimvamisa isuka ku-eyakhoamaphaphu futhi kaningiiumphumela wokukhwehlela isikhathi eside noma ukutheleleka kwesifuba.
Kuneziguli ezine-laryngitis ephikelelayo izinyanga, uma kungenjalo iminyaka, lokho kubonakala kunzima futhi kudelela yonke imithi ejwayelekile. Ezinye zalezi ziguli sezihlale zinomunyu womphimbo iminyaka, zidala umphimbo nokukhwehlela okungabangeli ukukhathazeka kuphela esigulini, kepha kube kubi kakhulu ngumndeni nabangane. Amafinyila emphinjeni kunzima ukuwelapha ikakhulukazi ngenxa yezimbangela eziningi ezahlukahlukene ezingaba khona.
Ukuhlolwa okuphelele kuyadingeka ukuxilonga kahle nokwelapha le nkinga. Ukuhlolwa okuningi kuyadingeka ngesimo sengqondo sokungashiyi itshe livuliwe. Akusenele ukuzama nje izidakamizwa.
Ake sihlole zonke izimbangela kanye nokuhlolwa okungenzeka okudingekayo. I-esophagus yishubhu lokugwinya elixhumanisa umlomo nomphimbo esiswini. I-Reflux, i-eosinophilic esophagitis, nezinye izinhlobo zedysmotility esophageal kungaholela ekucineni komqubuko wepharyngeal ngenxa yesicubu esiswini.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi isiguli esinomphimbo omuncu singase singabi nazimpawu ngaphandle kwe-mucus uqobo. Zonke lezi zimpawu zingase zingabi khona: isilungulela, ukuzwa okushisayo emphinjeni, ukuklinya, isigaxa emphinjeni, noma ukungakhululeki ngokugwinya. Kodwa-ke, uma lezo zimpawu zikhona, kwandisa amathuba ohlobo oluthile lwesifo sokuqunjelwa.
Ukuphenywa kwezimbangela zokuqunjelwa komqubuko ongapheli we-pharyngeal kufaka phakathi i-endoscopy ephezulu enama-biopsies, ukugwinya kwe-barium, ukuhlolwa kwe-impedance yamahora ama-24, i-manometry kanye nokuhlolwa kokukhafula. Izifo zesin-nasal ezifana ne-allergies, i-sinusitis engapheli kanye ne-vasomotor rhinitis kungadala ukuvuvukala kwe-mucosal okuqhubekayo ngenxa yedreyini yangemva kokubeletha. Ukuphenywa kwezimbangela ze-sino-nasal ze-pharyngeal mucus kufaka phakathi i-transnasal endoscopy, ukuhlolwa kokungezwani komzimba kanye ne-CT sinus scan.
ibhayisikili lezintaba vs ibhayisikili lomgwaqo
Ukusebenza kufaka nokuhlolwa kwezifutho zamakhala ezihlukene ezimbili, i-antihistamine nasal spray kanye ne-ipratropium nasal spray, yokwelapha i-vasomotor rhinitis, okungekho izivivinyo ezinhle kuyo lapho iziguli ezinomphimbo omncane zithola ukuthi ukudla okuthile kukhiqiza inhlamvu kusuka ku-pharynx mucus. Ukudla okuvame kakhulu okutholakala ukudala i-phlegm ukolweni, imikhiqizo yobisi, namaqanda. Khumbula ukuthi ukungabekezelelani kokudla akufanele kudidaniswe nokungezwani komzimba nokudla, futhi akufanele kudidaniswe nokudla okungadala i-reflux.
Ezimweni ezingavamile, izifo ezizimele njenge-Sjogren's syndrome zingadala ukuthi amathe avame ukukhiqizwa abe mkhulu futhi abukeke kakhudlwana, okungaholela ekuzweleni kokukhiqizwa kwamafinyila njalo. Kulesi simo, amafinyila amathe nje ajwayelekile akhiqizwa yibo bonke abanye abantu kumane nje kuba mkhulu kunokujwayelekile.
Ngemuva kwakho konke, isikhalazo ngomphimbo wesiguli somphimbo wesiguli empeleni singaba yinkohliso. Ayikho i-phlegm engaphezulu noma encane ezigulini ezinjalo kunanoma yimuphi omunye umuntu ojwayelekile. I-pharyngeal phlegm ingahlushwa ukulimala kwezinzwa emphinjeni, okuyiyona ebangela ukuzwa komphimbo.
Ukuze usebenzise isifaniso, i-sensory neuropathy yesikhashana yenzeka lapho umuntu enikezwa isipontsho esikindayo ehhovisi lamazinyo. Lapho umhlathi uba ndikindiki, akuvamile ukuthi lowo muntu ezwe ukuthi indawo ayigcini ngokuvuvukala nje kuphela, kodwa futhi uzizwa sengathi kunamathe ahlala njalo. Kepha akukho ukuvuvukala noma ukuvuza amathe lapho ubheka esibukweni.
Ngokufanayo, umphimbo omncane ngenxa ye-neuropathy ungadala i-pharyngeal phlegm engamanga. Lapho kutholakala imbangela yomphimbo womuntu njalo, ukwelashwa kungaqala lapho ngesisombululo esiphumelelayo. Khumbula, ezigulini ezinomqubuko wepharyngeal ophikelelayo iminyaka, akuvamile ukuthi kutholakale izimbangela ezingaphezu kwesisodwa ngakho-ke kudingeka ukwelashwa okuhlukahlukene okuhlukahlukene.
Ukuhlola Okugcwele Ungadinga ukubona ongoti abahlukahlukene abahlukahlukene, kufaka phakathi i-ENT, i-gastroenterologist, i-allergist, i-rheumatologist kanye nesazi sezinzwa.
Ingabe Amanzi Okuphuza Anganciphisa igazi lakho?
Amanzikuyasizaunciphise igazi, okwenza ukuthi kungabi lula ukwakheka kwamahlule, kuchaza uJackie Chan, uDkt. P.H.,iumlobi wokutadisha oholayo. Kepha ungacabangieyakhoi-H2O eyengeziwe konke ngasikhathi sinye. 'Kumelephuza amanzikulo lonkeiusuku lokugcinaigazi lakho lizacile, kuqala ngengilazi noma amabili phakathiiekuseni, 'kunezela uDkt.
Ziyini izimpawu zegazi elinamathelayo?
Amasosha omzimba akhiqiza okungajwayelekileigaziamaprotheni abizwa ngama-anti-phospholipid antibodies, okuthikubangele igaziamaplatelet okuhlangana ndawonye. I-Hughes syndrome kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi 'igazi elinamathelesyndrome 'ngoba abantu abanalesi simo kungenzeka ukuthi bakhe amahluleigaziizitsha (thromboses).
Kusho ukuthini uma ukuphuma kwakho kunegazi?
Ukutheleleka, kufaka phakathi izifo ezithathelwana ngocansi (STIs), kungadala isitho sangasese segaziukukhipha. Okumbalwa kwalokhu kufaka phakathi: i-Vaginitis. Lokhu ukuvuvukala kwesimo se-isitho sangasese sowesifazanekuvame ukubangelwa izinhlobo ezintathu zezifo: imvubelo, i-bacterial vaginosis, ne-trichomoniasis.6 2021.
Ingabe ukukhwehlela igazi akulutho?
Eyaziwa nangokuthi i-hemoptysis (he-MOP-tih-sis),ekhwehlela igazi, noma ngamanani amancane,canukwethuka. Noma kunjalo, ukukhiqiza okuncaneigaziIsikhwehlela esinezintambo asivamile futhi imvamisa asikho sína.
Ingabe i-caffeine ilinciphisa igazi lakho?
Ninii-caffeinekwenza i-igaziizitsha ezisemizimbeni yethu zinciphile, lokhu kushiya indawo encane yokuigaziukugeleza okuphinde kuphakameigaziingcindezi. I-igaziimikhumbi elethaigazikuya ebuchoshenicanfuthimncanecishe ngemuva kwama-27% ngemuvai-caffeineukudla okuyicanyehlisa ijubane ikhono lethu lokucabanga nokwenza imisebenzi yengqondo.25. 2017.
Ingabe amanzi kalamula ayalinciphisa igazi lakho?
Ilamunaujusi noma izingcezu kushisayoamanzingekeunciphise igazi lakho, hhayi ukukwenza ulahlekelwe isisindo.Ulamulaizonikela nge-vit C encaneeyakhoukudla. Hlambulula njaloeyakhoumlomo noma ibhulashieyakhoamazinyo ngemuva kokudlaulamulanoma ukuphuzailamunaijusi ngobacanqedaeyakhokoqweqwe lwawo amazinyo.8. 2005.